मिल्की वेको विशेषताहरू, उत्पत्ति र जिज्ञासाहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामी बस्ने ग्यालेक्सीलाई भनिन्छ मिल्की वे। पक्कै पनि तपाईंलाई त्यो थाहा थियो। तर हामी तपाईं बस्ने यो आकाशगंगा को बारे मा कति थाहा छ? त्यहाँ लाखौं सुविधाहरू, जिज्ञासा र कुनाहरू छन् जसले आकाशगंगालाई एउटा विशेष आकाशगंगा बनाउँदछ। यो हाम्रो स्वर्गको घर हो, जहाँ यो छ सौर्य प्रणाली र सबै ग्रहहरू हामी जान्दछौं हामी बस्ने ग्यालेक्सी ताराहरू, सुपरनोवाले भरिएको छ, नेबुला, ऊर्जा र अँध्यारो पदार्थ। यद्यपि त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन वैज्ञानिकहरु पनि रहस्य नै रहेको छ।
हामी तपाइँलाई मिल्की वेको बारेमा धेरै कुरा बताउन जाँदैछौं, यसको विशेषताहरूदेखि जिज्ञासा र रहस्यसम्म।
1 मिल्की वे प्रोफाइल
3 मिल्की वे कसले पत्ता लगायो?
मिल्की वे प्रोफाइल
यो आकाशगंगाको बारेमा हो जुन ब्रह्माण्डमा हाम्रो घर बनाउँछ। यसको आकृति विज्ञान यसको सर्पिलको विशिष्ट हो जुन यसको डिस्कमा main मुख्य हातहरू साथ छ। यो सबै प्रकार र आकारका अरबौं ताराहरू मिलेर बनेको छ। ती ताराहरूमध्ये एक सूर्य हो। यो सूर्यलाई धन्यवाद छ जुन हामी अवस्थित छौं र जीवनले हामीलाई यो जान्दछ कि गठन गरिएको छ।
आकाशगंगाको केन्द्र हाम्रो ग्रहबाट २ 26.000,००० प्रकाश वर्षको दूरीमा छ। यो निश्चित हुनको लागि ज्ञात छैन यदि त्यहाँ थप हुन सक्दछ, तर यो ज्ञात छ कि कम्तिमा एउटा सुपरमासिभ प्वाल मिल्की वेको बीचमा अवस्थित छ। ब्ल्याक होल हाम्रो ग्यालेक्सीको केन्द्र बन्छ र यसको नाम धनु ए राखियो।
हाम्रो ग्यालक्सी गठन गर्न शुरू भयो करीव १,13.000,००० वर्ष पहिले र स्थानीय समूहको रूपमा परिचित 50० आकाशगंगाहरूको समूहको एक हिस्सा हो। हाम्रो छिमेकी ग्यालेक्सी, एन्ड्रोमेडा, पनि साना ग्यालक्सीहरूको यस समूहको हिस्सा हो जसले म्यागेलानिक क्लाउडहरू पनि समावेश गर्दछ। यो अझै पनि मानव द्वारा बनाईएको वर्गीकरण हो। एउटा प्रजाति, यदि तपाईं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र यसको विस्तारको प्रस analy्ग विश्लेषण गर्नुभयो भने, केहि पनि छैन।
माथि उल्लेखित स्थानीय समूह आफैंले आकाशगंगाहरूको विशाल ठूलो जमातको हिस्सा हो। यसलाई कन्या सुपरक्लस्टर भनिन्छ। हाम्रो ग्यालक्सीको नाम प्रकाशको ब्यान्डको नाममा राखिएको छ जुन हामी ताराहरू र ग्यास बादलहरूको देख्न सक्छौं जुन पृथ्वीको बीचमा हाम्रो आकाश माथि फैलन्छ। यद्यपि पृथ्वी आकाशगंगा भित्र छ, हामी आकाशगंगा को प्रकृति को रूप मा पूर्ण बाहिरी तारा प्रणालीहरु को रूप मा बुझ्न सक्दैन।
धेरै आकाशगंगा अन्तर्बिधारी धूलको बाक्लो तहले लुकाइएको छ। यो धूलोले अप्टिकल टेलिस्कोपहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन र त्यहाँ के छ पत्ता लगाउँदैन। हामी रेडियो तरंगहरू वा अवरक्तको साथ टेलिस्कोपहरू प्रयोग गरेर संरचना निर्धारित गर्न सक्छौं। यद्यपि, हामी पूर्ण यथार्थताका साथ जान्न सक्दैनौं कि त्यस क्षेत्रमा के छ जहाँ अन्तर्देशीय धुलो भेटिन्छ। हामी केवल विकिरणका फारामहरू फेला पार्न सक्छौं जुन अँध्यारो पदार्थ भित्र छिर्दछन्।
हामी मिल्की वेको केहि मुख्य विशेषताहरूको विश्लेषण गर्ने छौं। हामीले विश्लेषण गर्ने पहिलो चीज भनेको आयाम हो। यो निषेधित घुमाउरो आकारको छ र १०,००,०००-१-100.000०,००० प्रकाश वर्षको व्यास छ। माथि उल्लेख गरिएझैं आकाशगंगाको बीचमा दूरी २ 26.000,००० प्रकाश वर्ष हो। यो दूरी त्यस्तो चीज हो जुन आज हामीसँग भएको जीवन प्रत्याशा र टेक्नोलोजीसँग मानव जातिको कहिल्यै यात्रा गर्न सक्षम हुँदैन। गठनको उमेर १ 13.600..400 अरब वर्ष अनुमान गरिएको छ, जुन करिब XNUMX०० मिलियन वर्ष पछि बिग बैंग.
यो आकाशगंगामा रहेको ताराहरूको संख्या गणना गर्न गाह्रो छ। हामी त्यहाँ भएका सबै ताराहरूलाई गणना गरेर एक पछि जान सक्दैनौं किनकि यो सहि थाहा पाउन धेरै उपयोगी छैन। मिल्की वेमा मात्र अनुमानित billion०० अरब ताराहरू छन्। यस आकाशगंगामा एक जिज्ञासा छ कि यो लगभग सपाट हो। मानिसहरु जो तर्क गर्छन् कि पृथ्वी सपाट छ को लागी गर्व छ कि यो पनि छ। र यो यो छ कि आकाशगंगा १०,००,००० प्रकाश वर्ष चौडा तर केवल १,००० प्रकाश वर्ष बाक्लो छ।
यो मानौं यो चापिएको र मोडिएको डिस्क हो जहाँ ग्रहहरू ग्यास र धुलोको वक्र हतियारमा सम्मिलित छन्। त्यस्तै केहि सौर्यमण्डल हो, केन्द्र र सूर्य संग ग्रहहरु र धूलको एक समूह आकाशगंगा को अशान्ति केन्द्र बाट २,26.000,००० प्रकाश वर्ष लंगर।
मिल्की वे कसले पत्ता लगायो?
मिल्की वे कसले पत्ता लगायो भनेर निश्चित हुन गाह्रो छ। यो थाहा छ गैलीलियो गैलीली पहिचान गर्न पहिलो थियो वर्ष १ 1610१० मा व्यक्तिगत ताराहरूको रूपमा हाम्रो ग्यालक्सीमा प्रकाशको ब्यान्डको अस्तित्व। यो पहिलो वास्तविक परीक्षा थियो जुन खगोलविद्ले आफ्नो पहिलो टेलिस्कोपलाई आकाशमा औंल्याए र हाम्रो आकाशगंगा असंख्य ताराहरू मिलेर बनेको देख्न सक्थे।
सन्‌ १ 1920 २० को रूपमा प्रारम्भमा, एडविन हबल यो एक थियो जसले आकाशमा घुमाउरो निहारिका वास्तवमा सम्पूर्ण आकाशगंगाहरू हुन् भनेर जान्न पर्याप्त प्रमाणहरू प्रदान गर्‍यो। यो तथ्यले मिल्की वेको वास्तविक प्रकृति र आकार बुझ्न ठूलो सहयोग पुर्‍यायो। यसले वास्तविक आकार पत्ता लगाउन र ब्रह्माण्डको मापनमा पनि जान्न मद्दत पुर्‍यायो जुन हामी डुबेका छौं।
हामी आकाशगंगा कति ताराहरू छन् भन्ने बारे पूर्ण रूपमा निश्चित छैनौं, तर यो जान्न पनि चाखलाग्दो छैन। तिनीहरूको गन्ती असंभव कार्य हो। खगोलविद्हरूले यसलाई गर्न उत्तम मार्ग खोज्ने प्रयास गर्छन्। यद्यपि टेलिस्कोपले केवल एउटा तारा अरू भन्दा उज्यालो देख्न सक्दछ। धेरै ताराहरू ग्यास र धुलोको पछाडि लुकेका छन् जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं।
ताराहरूको संख्या अनुमान गर्न उनीहरूले प्रयोग गर्ने तरिकाहरू मध्ये एक ताराहरू कति छिटो आकाशगंगामा घुम्छन् भन्ने अवलोकन गर्नु हो। यसले केही हदसम्म गुरुत्वाकर्षण पुल र ठूलो स indicates्केत गर्दछ। ताराहरूको औसत आकारले ग्यालक्सीको द्रव्यमानलाई विभाजन गर्दै, हामीसँग उत्तर हुनेछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं मिल्की वे र यसका विवरणहरूको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » मिल्की वे
मोरेन्स के हो?